”Somalia iyada ayaa ku guulaysanaysa dacwadda BADDA kaddibna waxay sheegan doontaa NFD!” – Arag sida ay Kenyan-ku uga niyad xun yihiin dacwadda dib loo dhigay! (Jawaabaha dadwaynaha) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Somalia iyada ayaa ku guulaysanaysa dacwadda BADDA kaddibna waxay sheegan doontaa NFD!”...
”Somalia iyada ayaa ku guulaysanaysa dacwadda BADDA kaddibna waxay sheegan doontaa NFD!” – Arag sida ay Kenyan-ku uga niyad xun yihiin dacwadda dib loo dhigay! (Jawaabaha dadwaynaha)
(Hague) 20 Maajo 2020 – Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee ICJ ayaa markale dib u dhigtay dhegeysida dacwadda badeed ee ka dhexeeysa Somalia iyo Kenya.
Maxkamadda ICJ ayaa sababta dib u dhiggan u cuskatay codsi ka yimid dalka Kenya oo ah dalka dacwadda loo haysto oo ku andacoodey in dhegeysiga dib loo dhigo sababo la xiriira durayga Coronavirus, sida ku cad warqad loo kala diray labada dowladood.
BALLANTA CUSUB – ICJ ayaa dacwadda dib ugu riixday ilaa sanadka xiga ee 2021 bisha Maarso 15-keeda.
Haddaba, xogo aannu kasoo ururinay sida ay dadwaynaha Kenyan-ka ihi arrintan uga fal-celinayaan iyaga oo aragtiyo kala geddisan ka dhiibanaya hoos ka eeg:
”Sidee Kenya kiiskan ugu guulaysanaysaa iyada oo ku mashquulsan dagaal gudeheeda ah?” ayuu is waydiiyey Chuma Baridi.
”Aanba ka dhigno inay Somalia guulaysato, saliidda dhan waxaa dhici doona dowladaha shisheeye ee hadda dabada ka riixaya Somalia,” ayuu yiri Young Dredz.
”Markii daacad loo hadlo kiiskani wuxuu muhim u yahay Somalia, marka waa caadi inay Kenya dib u dhigto!” ayuu ku dooday Rarewats nin ku soo gala.
”Marka aad hoggaan ka dhigato nin cabtooy ah xitaa derisku wax xushmad ah uma muujinayaan xuduudahaaga. Wuxuu wadaa hadal bilaa ficil ah,” ayuu ku saluugtamey Mistiq.
”Kenya kiiskan waa looga adkaanayaa, Ahuru wuxuu ku mashquulsan yahay dhamaystirka Ruto, kaddib Somalia waxay heli doontaa geesinnimo ay ku sheegato Woqooyi Bari (NFD)” ayuu saadiyey Itikwaki.
”Waa maxkamad u xaglinaysa Somalia,” ayuu qoray nin magaciisa ku koobay Light.
Previous articleDAAWO: Turkiga oo samaystay HUB istaraatiji ah oo ay dunida dhanba 3 dal oo qur ihi ka haystaan
Next articleDal aan laga filaynin oo Masiixi ah oo Ciidaha Muslimka u aqoonsaday FASAX QARAN